Ntọala Generator ụlọ ọrụ
Ntọala Generator Marine
Ụlọ elu ọkụ
Ntọala mgbapụta igwe mmanụ dizel
Igwe mgbapụta CUMMINS
Bank & ụlọ ọgwụ
Kedu uru nke injin dizel Deutz (Dalian)?
Oge nzipu: 05-07-2022
Igwe igwe mpaghara Deutz nwere uru na-enweghị atụ karịa ngwaahịa ndị yiri ya.Injin Deutz ya dị obere na nha yana ọkụ dị arọ, 150-200 kg dị ọkụ karịa injin ndị yiri ya.Akụkụ mapụtara ya bụ nke zuru ụwa ọnụ na nke ukwuu serialized, nke dị mma maka nhazi gen-set dum.N'ike siri ike,...GỤKWUO»
Deutz engine: Top 10 Diesel engines n'ụwa
Oge nzipu: 04-27-2022
Ụlọ ọrụ Deutz (DEUTZ) nke Germany bụ ugbu a bụ ndị kasị ochie na ndị na-eduga n'ụwa na-emepụta engine nọọrọ onwe ha.Injin mbụ Mazị Alto chepụtara na Jamanị bụ igwe gas na-ere mmanụ ọkụ.Ya mere, Deutz nwere akụkọ ihe mere eme nke ihe karịrị 140 afọ na gas engines, onye isi ụlọ ọrụ dị na ...GỤKWUO»
Oge nzipu: 03-29-2022
Kemgbe mmepụta ya nke mbụ mmanụ diesel na Korea na 1958, Hyundai Doosan Infracore na-ebunye mmanụ dizel na mmanụ gas na-emepụta na nkà na ụzụ nke ts na nnukwu ụlọ mmepụta engine nye ndị ahịa gburugburu ụwa.Hyundai Doosan Infracore i...GỤKWUO»
Kedu ihe bụ isi mmejọ nke akụkụ igwe na-ama jijiji nke Cummins Generator Set - Part II?
Oge nzipu: 03-07-2022
Cummins diesel generator sets na-eji ọtụtụ ebe n'ọhịa nke nkwado ndabere na mpaghara ike ọkọnọ na isi ike ọdụ ụgbọ mmiri, na ọtụtụ nke ike mkpuchi, kwụsiri ike ịrụ ọrụ, elu technology, na a zuru ụwa ọnụ ọrụ usoro.N'ikwu okwu n'ozuzu, Cummins generator set gen-set vibration bụ nke na-enweghị isi na-akpata ...GỤKWUO»
Kedu ihe bụ mmejọ nke akụkụ igwe na-ama jijiji nke Cummins Generator Set?
Oge nzipu: 02-28-2022
Ọdịdị nke Cummins generator set na-agụnye akụkụ abụọ, eletriki na ígwè ọrụ, na ọdịda ya kwesịrị ka kewaa ụzọ abụọ.A na-ekewakwa ihe kpatara ọdịda vibration ahụ ụzọ abụọ.Site na mgbakọ na nlekọta nlekọta nke MAMO POWER kemgbe ọtụtụ afọ, isi fa ...GỤKWUO»
Kedu ọrụ na kpachara anya nke nzacha mmanụ?
Oge nzipu: 02-18-2022
Ọrụ nke nzacha mmanụ bụ iji kpochapụ ihe ndị siri ike (ihe mkpofu ọkụ, ihe ndị dị na ígwè, colloid, uzuzu, wdg) na mmanụ ma nọgide na-arụ ọrụ nke mmanụ n'oge usoro nlekọta.Yabụ kedu ihe kpachara anya maka iji ya?Enwere ike kewaa ihe nzacha mmanụ ka ọ bụrụ ihe nzacha zuru oke...GỤKWUO»
Kedu ụdị igwe na-emepụta ihe na-adabara gị mma, ikuku jụrụ oyi ma ọ bụ mmanụ dizel gen-set?
Oge nzipu: 01-25-2022
Mgbe ị na-ahọrọ ihe nrụpụta mmanụ dizel, na mgbakwunye na ịtụle ụdị engines na ụdị dị iche iche, ị kwesịrị ịtụle ụzọ dị jụụ ị ga-ahọrọ.Ịjụ oyi dị ezigbo mkpa maka ndị na-emepụta ihe na ọ na-egbochi ikpo ọkụ.Nke mbụ, site n'echiche ojiji, injin nwere ihe...GỤKWUO»
Kedu ihe mmetụta nke mmiri dị ala na-emepụta mmanụ dizel?
Oge nzipu: 01-05-2022
Ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ ga na-emekarị ka ọ na-ebelata okpomọkụ mgbe ha na-arụ ọrụ nrụpụta mmanụ dizel.Mana nke a ezighi ezi.Ọ bụrụ na okpomọkụ dị na mmiri dị ntakịrị, ọ ga-enwe mmetụta ọjọọ ndị a na nhazi mmanụ dizel: 1. Okpomọkụ dị ntakịrị ga-eme ka ọnọdụ combustion mmanụ dizel emebi .GỤKWUO»
Kedu otu esi ekpe ikpe ụda na-adịghị mma nke generator set?
Oge nzipu: 12-09-2021
Nrụpụta mmanụ dizel ga-enwe nsogbu ụfọdụ n'ime usoro ojiji kwa ụbọchị.Kedu ka esi achọpụta nsogbu ahụ ngwa ngwa na n'ụzọ ziri ezi, ma dozie nsogbu ahụ n'oge mbụ, belata mfu na usoro ngwa ngwa, ma nọgide na-ejigide mmanụ dizel generator?1. Nke mbụ chọpụta wh...GỤKWUO»
Gịnị kpatara ibu ụzọ ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia ji bilie ọzọ?
Oge nzipu: 11-19-2021
N'afọ gara aga, ọrịa COVID-19 metụtara Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, ọtụtụ ụlọ ọrụ n'ọtụtụ mba kwụsịrị ọrụ ma kwụsị mmepụta.Akụ na ụba Southeast Asia dum nwere mmetụta dị ukwuu.A na-akọ na ọrịa na-efe efe n'ọtụtụ mba ndịda ọwụwa anyanwụ Eshia emeela ka ọ dị mfe na nso nso a...GỤKWUO»
Kedu uru na ọghọm dị n'ịnyịnya mmanụ dizel ụgbọ okporo ígwè dị elu
Oge nzipu: 11-16-2021
Site na mmepe nke usoro mmepụta ihe nke China na-aga n'ihu, ndenye mmetọ ikuku amalitelarị elu, ọ dịkwa ngwa ngwa ịkwalite mmetọ gburugburu ebe obibi.Na nzaghachi maka usoro nsogbu a, gọọmentị China ewebatala ọtụtụ amụma dị mkpa maka injin diesel…GỤKWUO»
Volvo Penta Diesel Ngwọta Ike Injin “Emipụta efu”
Oge nzipu: 11-10-2021
Ngwọta ọkụ ọkụ Volvo Penta Diesel Engine “Emempụ efu” @ China International Import Expo 2021 Na 4th China International Import Expo (nke a na-akpọkwa ya “CIIE”), Volvo Penta lekwasịrị anya n'igosipụta sistemụ dị mkpa ya na ọkụ eletrik na efu efu. ...GỤKWUO»
Maka ajụjụ gbasara ngwaahịa anyị ma ọ bụ ndepụta ọnụahịa, biko hapụ email gị na anyị ga-akpọtụrụ n'ime awa 24.
Adreesị: 17F, ụlọ nke anọ, Wusibei Tahoe plaza, 6 Banzhong Road, Jinan district, Fuzhou City, Fujian Province, China